आजको राशिफलमा के छ तपाईंको भाग्य ? – Pahilo Page
आजको राशिफलमा के छ तपाईंको भाग्य ?
२१ आश्विन २०७५, आईतवार ०९:५६ 656 पटक हेरिएको
मेषः– चिन्तन धेरै काम थोरै हुने सम्भावना बढि देखिन्छ । काम गर्दा अलमलमा नपर्नु होला समयमा निणर्य लिन सकिएन भने आएको अवसर पनि गुम्न सक्छ । अरुको काम गरेर जश कम मिल्नेछ । काम गर्दा अरुका कुरा बढि नसुन्नु होला र भर पनि नपर्नु होला । विवाद नगरी काम गर्नु होला । आर्थिक कारोवारमा चनाखो हुनुहोला ।
मकरः– आजको दिन पनि प्रतिकुल नै देखिन्छ । वोलाई र गराईको तलमेल मिल्ने छैन । अहार विहारमा ध्यान दिन सकिएन भने स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । मानसिक चिन्ताले छाड्ने छैन । व्यापार व्यवसायमा मन्दि नै आउनेछ । काम गर्ने जोश जागर बढ्ने छैन । आफन्तमा विवाद पर्ला । कामको वीचमा दुख दिने धेरै हुनसक्छन् ।
कुम्भः– अरुको भर नपरि काम गर्नु होला आज गरेका काम प्राय सफल हुनेछन् । काम साच्नु भयो भने साचिने छन् । उपलब्धि पनि गुम्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आँशिक लाभ हुनेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला । थोरै भए पनि पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ । हेलचक्र्याई गरेर काम नगर्नु होला । यात्राको सम्भावना टरेको छैन ।
मिनः– प्रतिश्पर्धात्मक काममा सफलता मिल्नेछ । खेलाडीको लागि दिन अनुकुल हुनसक्छ । पढाई लेखाई तिर भन्दा अन्य काममा बढि चासो रहनेछ । आम्दानीका नयाँ क्षेत्र देखा पर्ने छन् । मुद्धा मामिलामा विजय प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । काम गर्दा गोपनियता भङ्ग नगर्नु होला पछि आफैलाइै घाटा हुनेछ ।–पंडित सुराचार्य ।